Mufudzi weAustralia Husky Musanganiswa: Iyo Yakazara Aussie Husky Imbwa Inotungamira - Inobereka
Mufudzi weAustralia Husky Musanganiswa: Iyo Yakazara Aussie Husky Imbwa Inotungamira
Kazhinji yakatumidzwa zita rekuti 'Aussie Husky' kana 'Aussie Siberian', iyo Australia Mufudzi Husky Musanganiswa musanganiswa wekufudza pakati peAustralia Mufudzi naSiberian Husky.
Uku kuyambuka kwakatanga kuberekwa pakati pemakore gumi kusvika makumi maviri apfuura panguva iye mugadziri wekubereka craze , uye mukurumbira wayo wave uchiwedzera zvishoma nezvishoma.
Siberian Huskies neAustralia vafudzi vanoverengerwa imbwa dzechi14 nerechi15 dzinozivikanwa muAmerica, saka zvine musoro kuti vana vavo vanogona kunge vari mutambo mukuru.
Kuzvimiririra, akangwara uye ane rudo, weAustralia Mufudzi Husky Musanganiswa ane zvese.
Idzi imbwa dzinoita mushe kwazvo nemhuri dzinoshanda uye dzinoita imbwa dzakanaka dzekuchengetedza. Ngatitarisei chii chinoita kuti ichi chipiyaniso chikure kwazvo mune zvishoma zvishoma ...
Chii chinonzi Australia Mufudzi Husky Musanganiswa?
Kennel Kirabhu Kuzivikanwa uye Pedigree
Mufudzi weAustralia Husky Sanganisa Puppy
Mufudzi weAustralia Husky Sanganisa Temperament
Mufudzi weAustralia Husky Sanganisa Kukura uye Chitarisiko
Yakazara Yekutarisira Nhungamiro
Kudya uye Zvekudya Zvinodiwa
Kudzidzisa An Australian Mufudzi Husky Sanganisa
Anozivikanwa Matambudziko Ehutano
MuAustralia Mufudzi uye Husky musanganiswa ane kuwedzera kukurumbira sezvo ivo vakatanga kuberekwa muna 2004.
Kunze kwegore rekuberekesa, zvishoma zvinozivikanwa nezvekwavakabva, zvisinei, vabereki vavo vane nhoroondo yakanyatsonyorwa.
Vafudzi veAustralia, kunyangwe vane zita ravo, vakatanga kuonekwa pamapurazi muAmerica muma1840, zvikuru muCalifornia neTexas.
Zita rekuti 'Australia' rinobva muchitoro chinoshandiswa kupfuya imbwa iyi; iyo yakauya kuAmerica kuburikidza neAustralia . Idzo dzinoshanda nesimba, dzinoshanda, imbwa dzakangwara dzinokura munzvimbo ine vanhu vakawanda.
Mumwe mubereki weAustralia Mufudzi Husky Musanganiswa ndiSiberia Husky; wedzinza reAsia.
Ivo vaishandiswa nevanhu veChukchi kutakura mitoro mikuru mizhinji pamusoro pemakomo akafukidzwa nesinou. Kwavakabva zuva harizivikanwe, asi zvinofungidzirwa kuti iyo Siberian Husky ndeimwe yeiyo imbwa dzakare kudarika .
Iyezvino weSiberia Husky akakwanisa kuchengetedza hunhu hwayo uye mukurumbira.
Rudzi urwu rwunozivikanwa nekushanda kwarwo uye hunhu hunonakidza .
Sezvo imbwa iyi iri yambuka haina kuzivikanwa neAmerican Kennel Club.
Nekudaro, ese ari maviri purebred marudzi emubereki anozivikanwa ega.
MuAustralia Mufudzi Husky Musanganiswa inozivikanwa ne:
Iyo Imbwa Registry yeAmerica
Iyo Yepasi Pose Dhizaini Canine Registry
Iko hakuna chaiwo mashechi emasangano eichi chakayambuka, uye hapana chaiwo ekurera ekumisikidza ayo akagadzwa.
Usarega izvi zvichikumisa kuti uedze kununura imwe yeaya anoshamisa maberekero, kubata yako yekugara pekugara inogara iri zano rakanaka sezvo iwe usingazive kuti ndeapi marudzi avanayo ipapo.
Izvo zvakakosha kuti urangarire, kana uchitenga weAustralia Mufudzi Husky Sanganisa, kunyanya muchinjikwa wechizvarwa chekutanga , kuti irotari yechizvarwa.
Kwese kutaridzika uye hunhu hazvizove zvakatemwa, iwe unogona kunge uine imbwa iyo iri imwe rudzi kupfuura imwe, unogona kupedzisira uine muchinjikwa wakakwana une 50/50 musanganiswa.
Sezvo zvichikwanisika kuti chero musanganiswa wembwanana uonekwe, zvakakosha kuti uzive mubereki maberekero 'hunhu uye chitarisiko.
Yechipiri neyechitatu chizvarwa musanganiswa inowanzo kuve yakavimbika uye inofungidzirwa, asi hazvisi zvakajairika kuti marita aya atorerwe makadhi emusango.
Mufudzi weAustralia Husky Muvhenganiswa Inobereka Info
Saizi Pakati pe20 kusvika 23 ″
Kurema Pakati pemakumi matatu kusvika makumi matanhatu nemapondo
Hupenyu Makore 10-13
Rudzi rwekubereka Kusanganiswa uye zvimwe
Chinangwa Mugadziri Muchinjikwa
Inokodzera For Vanoshanda uye vane Ruzivo Mhuri
Ruvara Kusiyana Mavara maviri Kubva Kunotevera: Chena, Dema, Grey, Kirimu kana Bhurauni
Kudzikama Akangwara, Anodanana, Akaomesa musoro, Akasununguka -Mweya, Akashata
Mamwe Mazita Aussie Husky, Aussie Siberian
Kunyangwe iyo kufarirwa kwevabereki vavo , izvi zvinosanganiswa zvinowanzove zviri kudiwa zvishoma.
Nekudaro, mitengo yavo inoratidza izvo, uye YeAustralia Mufudzi Husky Sanganisa vana vanowanzoita mutengo pakati pe $ 500 ne $ 1,000 USD.
Sezvo zvese zvibereko zvevabereki zviri zvakaenzana saizi, zvinosiyana pakati pevabatsiri vanova mai nababa vemarara.
Zvakabatanidzwa pazasi chati yekukura yekufungidzira yemwana wako (uku kufungidzira kwekurema).
Min uremu (mapaundi)
Max uremu (mapaundi)
Ipo iine hushamwari nenhengo dzemhuri, iyi imbwa dzinoberekera dzinowanzove dzakazvimiririra uye dzakachengetedzwa nevasingazive, kazhinji dzichisvika pakuhukura kumeso asina kujairika.
Vanogona kuva imbwa dzakanaka chaizvo nekudzidzira.
Kunze kwehunyanzvi hwavo hwekuchengetedza imbwa, ivo zvakare vanoita vatariri vakanaka kwazvo.
Vanoita zvakanaka nevana vadiki uye vanowanzo dzingirira bhora kwemaawa asi vanodzivirira zvakanyanya uye havazoregi chero munhu wavasingade kutaridzika kwekuswedera padhuze.
Kunyangwe paine rusununguko, imbwa idzi imbwa dzinoshanda .
Ivo vanofanirwa kuchengetwa vachishingaira nguva dzese uye kana vasina kupihwa basa, vanozozviwanira ravo voga.
Kuzvipa wega mabasa anowanzo kuve iwo asingade varidzi, akadai se:
Mufudzi weAustralia Husky Musanganiswa mutambo mukuru wemhuri!
Rudzi urwu runoshanda uye rwakanyanya kukodzera kumhuri dzinofarira kuve panze.
Idzi imbwa dzinozivikanwa kuti dzinogara pamwe nedzimwe imbwa uye zvipfuwo mukati memhuri, chero zvikave zvine hukama kubva pazera diki.
Ivo havasi vese nharaunda kunze kwekunge vachinzwa kutyisidzirwa , asi kuvepo kwezvimwe zvipfuyo zvemumba hakuzovatambudza kana chiri chiitiko chezuva nezuva.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Australia Vafudzi imbwa dzinofudza uye kana vakakurudzirwa vanogona kuyedza kufudza vana vadiki, kana dzimwe mhuka dzinovaraidza.
Musanganiswa uyu une hunhu hwakafanana, nekudaro, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti vanopihwa zvakakwana kurovedza muviri, zvese zvepanyama nepfungwa.
Idzi imbwa dzinozivikanwa kuva dzakazvimiririra kwazvo.
Kufanana neAustralia Mufudzi, ivo vanogona kuve vanozvisarudzira zvakare.
Izvi zvinoreva kuti ivo havarerekere kuita hunyengeri, pachinzvimbo chekuda kuita zvavo zvinhu. Kana iwe uchida imbwa ine rudo, pamwe Goldendoodle yakanyanya kukuitira ?
Vazhinji varidzi vanowana yavo yeAustralia Mufudzi Husky Musanganiswa vanosarudza kuita yavo vega zvinhu.
Sezvo imbwa idzi dziri musanganiswa, zvakaoma kwazvo kufanotaura saizi yadzo.
Nzira iri nyore yekufungidzira saizi uye chimiro chembwa iyi kutarisa kurema uye kukwirira kwemarudzi maviri evabereki, wedzera iwo uye ugovane nepakati.
Kana mubereki weAustralia Mufudzi ari 40lb uye mubereki weSiberia Husky ari 60lb, saka wako weAussie Siberian anove angangoita 50lb.
Kazhinji, imbwa idzi dzinorema pakati pe 35 uye 65lb uye inomira pakati pe 20 ne 23 inches kureba.
Zvekare, sezvo imbwa idzi dzakayambuka, zvakaoma kwazvo kufungidzira maitiro avo.
Idzi imbwa dzinowanzo rondedzerwa se ' shaggier huskies ', Sezvavanowanzo chengeta iyo Husky physique neiyo shaggier jasi reAustralia Mufudzi.
Meso avo akangwarira uye anoda kuziva, ivo vanowanzo kuve neane hungwaru kuratidzwa pazviso zvavo.
Mufudzi weAustralia uye Husky Musanganiswa ane mativi akaumbwa nenzeve uye miviri yakagwamba. Miviri yavo yakasungwa musuru uye yakasimba mukuvaka.
Kazhinji kutaura, musanganiswa weAustralia Mufudzi Husky ane bi-ruvara jasi, kazhinji rimwe vara pamusoro pechiso uye kumashure, uye imwe pamusoro pechipfuva, mudumbu nemakumbo.
Uku kuyambuka kunouya mune mazhinji mavara anosanganisira:
Iyo bhachi pachayo ipfupi kusvika pakati nepakati pakureba uye yakanyanyisa.
Rudzi urwu runofarira kugara nhaka yevakadzi vaviri jasi izvo zvisingafanire kutemwa , asi kana ikasiiwa kumidziyo yayo inogona kuita musango!
Nekuda kweizvozvo, kushambidzika nguva dzose kunodiwa (zvimwe pane izvo gare gare).
Mufudzi weAustralia Husky Musanganiswa anotanga kudonhedza zvishoma mukati megore, uyezve ave nazvo maviri mwaka 'kuputika' , uko kwavanodurura ruzhinji rwejasi ravo nekukasira.
Idzi imbwa inorema shedders, uye haina kukodzera avo vane kurwara kwembwa .
Nguo dzavo dzakakora dzinodururwa zuva nezuva uye dzinoda kushambidzika nguva dzose (zuva rega rega kana zvichibvira).
Pakushambidzika, varidzi vanofanirwa kutora hunyanzvi hwekutarisa jasi ravo kuti riwane inda nezvikwekwe sezvo vachigona kubatwa mune yavo imbwa fluffy jasi!
Kuti udzivise chero zvingangoitika nyaya dzemazino, kukwesha mazino kunofanirwa kuitwa kazhinji sekubvumirwa kwemhuka yako, asi zvine mutsindo mazuva ese.
Kucheka kwembambo kunofanira kuitwa mavhiki mana kusvika matanhatu ega ega nehunyanzvi, senge muridzi wemba kana chiremba wemhuka.
Mufudzi weAustralia Mufudzi Husky anokodzera zvakanyanya kumhuri inoshingairira yaive nembwa kare uye vane ruzivo rwakakodzera rwevanobata.
Ivo vanoita zvakanaka nenzvimbo huru dzakavhurika, saka kuve neyadhi huru, uko imbwa yako inogona kuzvirovedza-muviri, inobatsira zvikuru.
Kudya Kwezuva Nezuva Kudya
Tungamira 1,600 macalorie
Mufudzi weAustralia Husky Musanganiswa ari chaizvo imbwa ine chikafu saka nguva dzekudya dzinogona kuve yavo yavanofarira chikamu chezuva!
Idzi imbwa dzinoda dzinosvika ina makapu eiyo yepamusoro mhando yakaoma chikafu zuva nezuva.
Izvi zvinofanirwa kupatsanurwa kuita kudya zviviri, makapu maviri mangwanani uye makapu maviri manheru.
Mari iyi inozosiyana zvichienderana nehukuru hwembwa yako, imbwa diki dzinoda huwandu hwakadzikiswa uye imbwa diki diki dzinoda zvimwe.
Sezvo canine kufutisa idambudziko riri kukura muAmerica , edza kupa imbwa yako chikafu chinonaka asi chine hutano, senge imbwa miriwo yakachengeteka kana michero.
Zvekurovedza muviri Zvinodiwa
Maminitsi Maminitsi makumi mapfumbamwe
Rudzi urwu rwakavhenganiswa runoda kuve rwekunze.
Ivo vanowanzo vari kune avo vanofara kwazvo kunze munzvimbo dzakashama dzakashama uye vanofarira kuve vari kutandara kuburikidza neminda.
Mufudzi weAustralia uye Husky Mixes hazviite zvakanaka nekuvharwa mukati; kuwana nzvimbo yekunze kunogara kuchikosha.
Zvisinei, iyi nzvimbo yekunze inofanira kunge yakachengeteka sezvinobvira, ivo vari anozivikanwa kuva anoita zvakaipa kana achinetseka .
Kupa imbwa dzerudzi urwu mhando ine mizhinji yekurovedza muviri zuva nezuva, kwete chete epanyama asi nepfungwa, inzira huru yekuona imbwa inofara uye hukama hwakanaka.
Imwe nzira chaiyo yekuita izvi kuedza kutora imbwa yako kune imwe nzvimbo zuva rega rega.
Kugovera zvakasiyana muimbwa dzako zuva nezuva maitiro zvinogona kubatsira kwazvo pakuzvichengeta zvichishanda uye zvakabatikana.
Muzviitiko zvakawanda, iyo Australia Mufudzi uye Husky Mix imbwa inodzidziswa kwazvo.
Idzi imbwa dzakagara nhaka vanhu vakanakisa hunyanzvi uye njere kubva kuvabereki vavo; Nekudaro ivo vadzidzi vanomhanya kwazvo vanoziva kuteerera kwekutanga zviri nyore.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti nekuda kwavo kwakazvimirira streak vanogona kunge vakasindimara , kunyanya kana ivo vasiri mumood. Vanogona kuve varairidzi vanofanirwa kuyedza kuongorora mafungiro embwa yavo pamberi pechikamu chekudzidzisa.
Idzi imbwa vane simba rakakwirira , saka edza kudzidzisa mushure mekufamba kana ivo vakanyatsoteerera kupesana nehutachiona.
Kuvadzidzisa kuita mabasa pamba apa izano rakanaka.
Vadzidzise kurongedza matoyi avo uye kukuunzira zvinhu pane zvinodiwa. Iwe unogona zvakare kuvadzidzisa mitambo uye mapuzzle ekuita iwe uri kure nemba.
Sezvazvakaita nezvipuka zvese zvembwa, pane mukana weAustralia Mufudzi Husky Mix kukudziridza dzimwe nyaya dzehutano.
Iwo maviri akajairika ndeaya:
Nyaya Dzemaziso (cataract kana inofambira mberi retinal atrophy)
Dzese idzi nyaya dzehutano dzinoonekwa mumhando dzevabereki.
Hip dysplasia inouya kubva ku kuumbwa kusiri iko kwekubatanidzwa kwechiuno , zvichikonzera kusagadzikana uye kunyange kurwadza kufamba.
Muzviitiko zvakawanda izvi zvinotarisirwa nemishonga yekurwadziwa, asi nezviitiko zvakakomba zvinogona kugadziriswa nekuvhiya.
Kunyangwe zvakajairika zvakanyanya, zvinokwanisika kukwenya zvibodzwa kuvabereki.
Nyaya dzemaziso dzinogona kusanganisira kugara nhaka kwemaziso kana inofambira mberi retinal atrophy .
Kufanana nehudyu dysplasia, zvinokwanisika kuyedza izvi muvabereki saka pazvinokwanisika kuomerera kuti hutano hwemufudzi hutarise vese vabereki nembwanana vasati vatenga.
Dzimwe nguva kusanganiswa uku kunogona kuita pfari. Izvi hazviwanzoitika, asi hazvinzwike, saka icho chinhu chekurangarira kana uchigamuchira imwe yeiyi imbwa.
Kana iwe uri mhuri yekunze, uchitsvaga imbwa inoshanda uye ine rudo, iyi inogona kunge iri imbwa yako!
Idzi imbwa dzine rudo zvakanyanya uye dzinodzivirira, saka mutambo mukuru kune chero munhu anotsvaga imbwa yevarindi futi.
Izvo hazviite zvakanaka nekufinhwa, saka mijenya yekurovedza muviri (zvese panyama nepfungwa) ndeyechokwadi inofanirwa kana iwe ukatora imwe yeiyi imbwa. Nekudaro, kana iwe uri kufunga nezve kutenga yeAustralia Mufudzi Husky Musanganiswa, iwe uchafanirwa kuve nechokwadi kuti iwe unayo nguva yekuzvipira kwavari.
Iwe une wekuAustralia Mufudzi Husky Musanganiswa kumba here? Tisiye isu chirevo pane idzi imbwa dzinotyisa!
Rottweiler Pitbull Mix - Yakazara Yevaridzi Nongedzo kuPitweilers
Greyhound Imbwa Inobereka FAQs & Ruzivo
marudzi embwa akasanganiswa nehusky
mazita embwa dzehadzi
border collie chocolate lab musanganiswa
huru pyrenees ruzivo uye chokwadi
mazita embwa dzechirume emachokoreti labs